'Yimina unkosikazi osemthethweni weSilo' - Ilanga News
Home Izindaba ‘Yimina unkosikazi osemthethweni weSilo’
‘Yimina unkosikazi osemthethweni weSilo’
Undlunkulu uSibongile uthi iMbube yangena emshadweni ohlanganisa amafa ibhekile
UNDLUNKULU uSibongile ufake amaphepha enkantolo ethi nguyena inkosikazi esemthethweni yeSilo.
UKUFAKA amaphepha enkantolo kukaNdlunkulu uSibongile Winnifred Zulu, uMaDlamini, ongowokuqala ukugcagcwa yiSilo esikhothame ngenyanga edlule uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, kukhombisa ngokusobala ukuthi ubengeneme ngokubekwa kweNdlovukazi yesithathu yeMbube uMantfombi Dlamini Zulu, owelele kwelamathongo ngoLwesine.
Lokhu kwenze kwacaca bha ukuthi mkhulu kakhulu umbango okhona endlunkulu kaZulu, phambilini obulokhu ungamahemuhemu engekho ofuna ukuphumela obala akhulume ngomsuka wawo. La maphepha asenkantolo awucacisa ngokusobala umbango wamandla namafa oqubukayo kulo mndeni.
Okunye okucaca bha kule ncwadi efakwe enkantolo wukuthi nakubona oNdlunkulu beSilo, kukhona ukuzibona bengalingani kubona. UNdlunkulu Sibongile ufake amaphepha enkantolo lapho ethi ufisa inkantolo kube yiyona engenelelayo, ichaze ukuthi yimaphi amalungelo akhe njengenkosikazi yokuqala esemthethweni, eshade noBayede.
Kuningi okungehlanga kahle kundlunkulu wokuqala
Ngokwamaphepha afakwe enkantolo ePhakeme yaseMgungundlovu, kuvela ukuthi kuningi okwenzeke ngemuva kokukhothama kweSilo, okungehlanga kahle kuNdlunkulu wokuqala futhi ukubeka ngokulandelana kwakho kula maphepha ILANGA eliwabonile amakhophi awo. UNdlunkulu wokuqala ongowasesigodlweni saKwaKhethomthandayo, uthi ngokwazi kwakhe nguyena obeshade neSilo ngaphansi komthetho iMarriage Act, No 25 of 1961. Uthi ngokuqonda kwakhe kusho ukuthi umshado wabo ngohlanganisa amafa. Uthi lokhu kusho ukuthi nguyena okumele angamele izindaba seSilo esikhotheme.
Uqhuba athi ucela inkantolo igunyaze ukumiswa kokuthi kuqhutshekwe nokuqokwa kwebambabukhosi kulo mbuso wakwaZulu, njengoba ethi unezizathu ezinqala ezenza akuphikise ukubekwa kwaso. Uthi ucela inkantolo ukuba imise amalungu omndeni weSilo okuhlanganisa kuwona uMntwana uThembi Ndlovu, uMntwana uMbonisi Zulu, uMntwana uThulani Zulu, uMntwana Lindi Zulu, uMntwana Vulindlela Zulu, uMntwana Mxolisi Zulu,
uMntwana Mathuba Zulu, uMntwana Mavis Zungu nawo wonke amalungu alo mndeni ukuba athi ahambisane nokuthi uNdlunkulu waKwaKhangelamankengane (okhotheme) uyibambabukhosi esihlalweni sobukhosi bakwaZulu njengeSilo samaZulu.
Kakumphathanga kahle ukungazili kukandlunkulu uMantfombi
Kula maphepha uphinde waveza ukuthi ufisa inkantolo ivimbe uhulumeni waseNingizimu Afrika nowaKwaZulu-Natal, ukuba bavumelane nesinqumo sokubekwa kukaNdlunkulu okhotheme ekutheni kube nguyena oyibambabukhosi, ibe ingakalungiswa indaba yencwadi yamafa yena angahambisani nayo.
Kula maphepha, uNdlunkulu uSibongile unxusa inkantolo ukuba iphoqe ihhovisi likaNdunankulu waKwaZulu-Natal ukuba linike abameli bakhe uhlu uma lukhona, lwamalungu omndeni wesilo olusayiniwe, lusayinwa yiSilo esikhotheme njengoba kusho umthetho obhalwe kwiRoyal Household Trust Act. Kuningi-ke okubonakala kungahlalanga kahle kuNdlunkulu wokuqala, njengoba ethi ngemuva kokukhothama komyeni wakhe, yena nabanye ondlunkulu kudingeke ukuba bazile baze bagqoke nenzilo.
“Kungimangazile-ke ukuthi emhlanganweni owawungomhla ka-14 enyangeni edlule uNdlunkulu Mantfombi, wayengayifakile nhlobo inzilo. Okubalulekile-ke wukuthi uNdlunkulu Mantfombi ube esegezwa ngoba nakho kwenzelwa ukuthi abekwe njengeBambabukhosi okucacayo ukuthi ugezwa yedwa nje, yingoba bekuvulwa indlela yokuthi akwazi ukuqhoqhobala isihlalo sobukhosi njengoba kuthiwa kusho incwadi yamafa,” kusho yena.
Uveza eyokuhlongozwa kokubambisa uMntwana uMbonisi isihlalo
Uqhuba athi ngisho ukubekwa njengeBambabukhosi akazi ukuthi kwafikwa kanjani kukho njengoba ezwa sekumenyezelwa kwabezindaba ukuthi nguyena uNdlunkulu uMantfombi iBambabukhosi. Uthi ngokwazi kwakhe amanye amalungu omndeni ayehlongoza ukuthi makube nguMntwana uMbonisi ongaba yibamba kodwa kwanguye uNdlunkulu Mantfombi okunqabayo lokho.
Kuningi okunye akubalula njengezinto ezenzekile ebezikhombisa ukumvalela ngaphandle njengenkosikazi endala futhi yokuqala yeSilo. Uqhuba athi okumkhathazayo wukuthi yena uyinkosikazi yeSilo ngokusemthethweni kanti noma bengashadanga ngokwesintu kodwa manje usebona esecindezeleka ngenxa yesintu.
“Ngicela inkantolo kube yiyona ecacisa ngamalungelo ami njengenkosikazi esemthethweni yeSilo ngoba ukubekwa kukaNdlunkulu Mantfombi ngikubona kubukela phansi amalungelo ami njengenkosikazi esemthethweni ngokwemithetho yaseNingizimu Afrika. ISilo esikhotheme sazikhethela sona ukushada nami umshado osemthethweni (civil marriage). Ngalokhu sasivuma (iSilo) ukuhambisana nemithetho ehambisana nawo (lo mshado) ongakuvumeli ukuba nesithembu,” esho.
Uthi uvikela amafa okumele awathole ukungacakazwa ngokungemthetho
Uthi abammeli bakhe bamtshela ukuthi uma iBambabukhosi lingabekwa ngokusemthethweni, lokho kuzokhinyabeza amalungelo akhe okuthola ingxenye yamafa eSilo.
“Uma engabekwa njengeSilo lokho kuzobe sekusho ukuthi nguyena umholi walo mndeni okuzobe sekubukela phansi ukuthi yimi inkosikazi esemthethweni. Amafa okumele ngiwathole azobe esehlukaniseka ngokungekho emthethweni,” kusho yena.
Le ncwadi eseyisenkantolo ivele ngesikhathi isizwe samaZulu sisemanzini ngemuva kokukhothama kuka-Ndlunkulu obeyiBambabukhosi. Kuvela ukuthi ubesenesikhathi eside edunguzela okuthe ngo-Lwesine kwamenela.
UMntwana uThulani Zulu ongomunye wabakhulumela indlunkulu, uthe ubengakayiboni le ncwadi efakwe enkantolo, wathi akakwazi ukukhuluma ngayo.
Previous articleBadutshulwe bafa abafundi ababili
Next articleIhlazo iSafa yethula umqeqeshi weBafana nge-Laptop